Ngaghari iwe kpu oku n’onu n’aga n’ihu ugbu a n’Istanbul - Igbo News | News in Igbo Language
Jun 16, 2013 - 00:00 Updated: Jan 22, 2021 - 00:12
Ndị ahụ na-eme ngharị iwe malitere na-akpa aghara. Onye Prime Minista mba Turkey, Tayyip Erdogan, zigara ndị uwe ojii ka ha chụsasịa igwe mmadụ ahụ gbakọrọ n’ogige Taksim Square na-eme ngagharị iwe n’Istanbul.
Nke a butereziri nnukwu ọgba aghara. Ndị ngagharị iwe malitere tụwa ndị uwe ojii okwute. Ndị uwe ojii na-atụzị ngwa ọgụ tia gasị aghara aghara. Ha chịpụtara akara ngwa katapila ndị e ji agba mmiri, were mmiri na-agba ndị ahụ na-eme ngagharị iwe. Ihe e nweziri ugbu a n’Istanbul bụ ọnọdụ ọkụ sị ite pụọ ite sị ọkụ pụọ n’etiti ndị uwe ojii na ndị ahụ na-eme ngagharị iwe.